Ukuvakasha kwewayini eSpain | Izindaba Zokuhamba
Ukuvakasha kwewayini eSpain
Ukulinywa komvini sekuyinto yobuciko eSpain. Akumangazi-ke ukuthi ngomunye wabakhiqizi bewayini abakhulu kunabo bonke emhlabeni, onamahektha angaphezu kwezi-900.000 ezivinini nezinhlobonhlobo zamagilebhisi.
Abamhlophe, ama-rosés, ama-reds, izinhlawulo, ama-cavas, abenyezelayo ... konke kubhangqwa kahle nesitsha esithile futhi enye yezinto ezokwenza uthokozele iSpain kakhulu yi-gastronomy yayo futhi, iwayini layo.
Ukwenza ezokuvakasha kwewayini eSpain kungokuhlangenwe nakho okuzokuthatha ukuthi wazi ama-wineries wesiko noma we-avant-garde, uthole amakilasi kusuka kubachwepheshe bezesayensi, ulale phakathi kwezivini… Okulandelayo, sikunikeza imibono eminingana yokujabulela leli zwe ngokubambisana nabangane bakho noma nomndeni wakho.
1 Isiko lewayini
2 Imizila yewayini eSpain
Iwayini liyingxenye ebalulekile yesiko laseSpain, njengezwe laseMedithera. Kuyo yonke indawo yayo kuneminyuziyamu eminingi ekhethekile ezokukhombisa isiko lokulungiswa kwewayini nokunwetshwa kwalo: kusuka eMnyuziyamu Wezindawo Zewayini zaseCatalonia (VINSEUM), kuya eCasa del Vino "La Baranda" eTacoronte noma eThematic Center "Villa Lucía" e-valava ukubala abambalwa.
Imizila yewayini eSpain
Uma futhi ufuna ukwazi isiko lewayini esifundeni ngasinye, ungathola imizila eqondisiwe ngezikhungo zayo ezinomlando kanye nezivini zayo ezibanzi kanye ne-wineries. ESpain kunemizila eminingi yewayini ehamba izindawo ezinengcebo enkulu yamasiko kanye ne-gastronomic futhi yonke inemisebenzi, ukubukeka komhlaba kanye nemikhosi edumile ezokwenza uhambo lwakho lube yinto ehlukile.
Uhambo lungaqala eGalicia, enyakatho-ntshonalanga yezwe. Umzila iRías Baixas umzila wewayini i-Albariño: umhluzi omusha ofanele ukuhlanganiswa nezinhlanzi nezinhlanzi zasolwandle. Thatha ithuba lokuthola ugu lwayo, olunamabhishi amahle kakhulu alungele ukuqhuba imidlalo yezamanzi.
Futhi enyakatho yeSpain, ukuqhela empumalanga yiRioja Alavesa Route. Lapha amanye amawayini aseSpain ahlonishwa kakhulu enziwa emazweni omhlaba. Ngaphezu kwalokho, kule ndawo ungabona izakhiwo ze-avant-garde nezindawo zewayini ezibhekwa njengamabhishobhi amakhulu ewayini, okuwumsebenzi wabakhi bezakhiwo abadumile abanjengoSantiago Calatrava noma uFrank O. Gehry, phakathi kwabanye.
Ebangeni nje elingamakhilomitha ayi-100 kunenye indlela yewayini, eyeNavarra. Amadolobha afana ne-Olite noma iTafalla adume ngamawayini abo e-rosé. Lo mzila ukhumbula ukubaluleka kwalo mhlaba ngesikhathi seCamino de Santiago, esamenyezelwa yi-UNESCO njengeNdawo yamaGugu Omhlaba.
Uhambo luyaqhubeka ludlula e-Aragon, eceleni kweSomontano Wine Route ikakhulukazi lapho kwenziwa khona amawayini amnandi. Esifundazweni saseHuesca, ngaphezu kwezivini, singamangala ngezakhiwo ezinkulu zeBarbastro noma i-Alquézar kanye neSierra y los Cañones de Guara Natural Park, indawo eyingqayizivele eYurophu.
Ukuma okulandelayo emzileni wewayini yiCatalonia, ekumema ukuthi uhlole iPenedès Wine neCava Routes. Ukusho ukuthi iCatalonia ukusho i-cava, isiphuzo esinokunambitheka okungaqondakali. Kunconywa kakhulu ukuthatha uhambo oluqondisiwe lwezinqaba kanye ne-wineries ukuthola ifa elihehayo lamasiko esifundeni, ngezibonelo eziningi zobuciko be-Romanesque ne-Modernist.
Ngokuya eningizimu sithola iJumilla Wine Route eMurcia, ebonakala ngamawayini ayo awine imiklomelo eminyakeni yamuva. Kuyafaneleka futhi ukuvakashela idolobha elidala nezindawo zalo ezingokwemvelo, neSierra del Carche Regional Park.
Umzila Wewayini iMontilla-Moriles Wine ungena esifundazweni saseCórdoba. Kulolu hambo uzoba nethuba lokuba ne-tapas, indawo yokudlela e-gastronomic egxile kakhulu esifundeni. Awungeke uhambe ngaphandle kokuvakashela izakhiwo zayo ezinkulu kanye ne-cathedral-mosque yayo, emenyezelwe njenge-UNESCO njengeGugu Lomhlaba.
Umzila wewayini iLa Mancha uyiphetho lokugcina lolu hambo oluhehayo. Ubuwazi ukuthi ngenxa yenani lamahektha izivini ezilinyiwe, iCastilla-La Mancha iyindawo enkulu kunazo zonke ekhulisa iwayini emhlabeni? Umhubhe omude kakhulu wezokuvakasha eYurophu utholakala kule ndawo: iDon Quixote Route. Yima endleleni ukunambitha i-gastronomy yeLa Mancha bese ungena eTablas de Daimiel National Park noma eLagunas de Ruidera ukuthola imvelo yeLa Mancha ngabo bonke ubukhazikhazi bayo.
Le ndlela iyindlela yewayini, indlela yokuqala yokuthola ingcebo yokudla kwaseSpain. Ama-aroma, ukunambitheka, umlando nobuciko kuhlangana kulokhu okuhlangenwe nakho. Ngabe uzoyikhumbula?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Gastronomy » Ukuvakasha kwewayini eSpain